Maitiro e vitaminize Finder windows | Ndinobva mac
Iyo Tsvaga ndiyo mubatsiri mukuru watinayo mu macOS kuti tikwanise kuwana ruzivo rwese rwatakachengeta pane hard drive yekomputa yedu. Iyo yakaenzana neWindows file Explorer asi, sezvaungafungidzira, neimwe misiyano maererano nemashandiro ayo paMac.
Patinodzvanya pane icon ye Tsvaga muDock, iyo inowanzoitika uye kana usati wachinja nzvimbo yayo ndiyo yekutanga icon iyo yatinowana mubharu yepasi yedesktop, hwindo reKutsvaga rinovhura. Mune mavhezheni ekutanga eMac anoshanda system, patakadzvanya iyo Finder icon, takaratidzwa hwindo rimwe chete uye ndizvo Hatina kugona kuve neanopfuura rimwe hwindo rekutsvaga rakavhurika pachiratidziro panguva imwe chete.
Nekufambiswa kweshanduro dzeMacOS dzakachinja uye ikozvino zvinogoneka kuvhura seakawanda maSeera windows sezvaunoda. Iye zvino, kana iwe ukatarisa pane inotevera skrini, hwindo reKutsvaga rakagadzirwa nebara reruboshwe iro rinoratidza nzvimbo dzakasiyana panogona kuwanikwa mafaera ehurongwa, nzvimbo iri kurudyi kwatinoratidzwa zvirimo zviri mune yega yega zvinhu kuruboshwe rwemberi uye padenga repamusoro mune mabhatani akateedzana nawo gadzirisa maonero, Kudzoka / Pamberi, Gadzira, Govana, Matagi, nezvimwe.
Parizvino, handifunge kuti ndakakudzidzisa chero chinhu chawaisatomboziva, asi chokwadi ndechekuti hwindo reKutsvaga rinogona kukwidziridzwa nematanho maviri e keyboard, ichiita nzira yefaira chero ratinosarudza kana rinowanikwa mukati chikamu chezasi chehwindo.kumusoro tiratidze bha yetabhu ku kukwanisa kuve neakawandisa Finder windows munzvimbo imwechete uye kwete seakasiyana windows.
1 Wedzera faira nzira pazasi peiyo Finder hwindo
2 Wedzera tab bar kumusoro kweiyo Finder hwindo
Wedzera faira nzira pazasi peiyo Finder hwindo
Kuti tiite kuti bar rioneke pazasi peiyo Finder hwindo uko nzira yefaira ratinosarudza inoratidzwa, tinovhura Finder hwindo tobva tadzvanya kiyi yekubatanidza ⌥⌘P. Zvino paunosarudza faira iwe uchaona nzira iyo yakafanana inoonekwa mune iyo bar pane system hard disk
Wedzera tab bar kumusoro kweiyo Finder hwindo
Nekudaro, kana iwe uchida kuti iyo tabu bar iratidzwe kumusoro kwe Finder windows, iyo yakakosha mubatanidzwa iyo yaunofanirwa kumanikidza pane yako Mac keyboard ichave ⇧⌘T.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Maitiro e vitaminize Finder windows